Sagantaa Kamisa Mudde 16, 2021
Konyaa Lixa Wallaggaa, Magaalaa Qondaalaa fi Begii dabalatee, Gandeen baadiyyaa Ona Qondaalaa fi Ona Begii jalatti argaman, kanneen baay’inaan torbaatamaa (70) ol ta’an to'annoo WBO jala erga galfamanii baatii tokkoo ol lakkoofsisanii kan jiran ta’uu.
Saamichi qabeenyaa fi dararaan Uummata Oromoo irratti, Kibba-Baha Oromiyaa, Konyaa Arsii Lixaa keessatti, aangawoota, milishootaa fi loltoota mootummaa Impaayerattiitiin raawwatamu akkaan hammaachuu. Dabalataanis, Hawaasni Oromoo leenjii 'Gaachana Sirnaa' jedhamuun gidirfama ulfaataa mudachaa jiraachuu.
Daafii addaan-citiinsa neetorkiin, haala Uummanni Oromoo Walloo keessa jiru ilaalchisuun odeessa qabatamaa bakkasii argachuun dadhabamullee, odeessa dhalattoota Walloo, biyyoota ambaa keessa jiraachaa jiran irraa dhaga'amaa jiruun, haleellaan humna xiyyaaraa fi waraana lafoon Uummata Oromoo Walloo irratti raawwatamu itti-fufee jiraachuu mirkaneeffachuun danda'amee jira.
Qaamota Gadaa Karrayyuu, baay’inaan Soddomii-Sagal (39) ta’an, kanneen Roobii Mudde 1, 2021 quubsuma Abbootii Gadaatii butaman keessaa, Abbaa Bokkuu Karrayyuu, Abbaa Gadaa Kadiroo Hawaas Boruu dabalatee, namoonni Kudha-Afur (14), galgaluma gaafasii, gara Ona Booset, iddoo Aanolee jedhamuun waamamuutti geeffamuun, bakka tokkotti, haala suukanneessaan ajjeefamuu.
Duguuggaan sanyii qindaawaan, Loltoota MKII fi humnoota finxaaleyyii Amaaraa kanneen bakkas jiraatanii fi kanneen mootummaan leenjisee, hidhachiisee Naannoo Amaaraa irraa gara Oromiyaatti seensiseen, Konyaa Baha Wallaggaa, Ona Giddaa Ayyaanaa keessatti, Uummata Oromoo irratti raawwatamu akkaan hammaatee itti-fufee jiraachuu
Haleellaan humna xiyyaaraa fi meeshaalee waraanaa gurguddaan raawwatamu jabaatee itti-fufuun wal-qabatee, addaan citiinsa ibsaa fi quunnamtii neetorkii mudateen, Uummanni Oromoo Walloo rakkoo hamaaf saaxilamee jiraachuu.